वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : October 2011
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ October 28, 2011
आकाश पूरै खुलीरहेछु
तस्बीर स्रोत यहाँ
यहाँ, त्यहाँ भुलीरहेछु
यहाँहरु सबैमा तिहारको हार्दिक मंगलमय शुभकामना ब्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरुको जीवन सधैं शान्ति, आनन्द र समृद्धिको ज्योतिले उज्यालो बनोस्! Posted by
दशैं मनाउने क्रममा काठमाण्डौंमा थिएँ। कोजाग्रत पूर्णिमातिर पोखराबाट (दगाम यात्राका) साथीहरुले फोन गर्नुभयो, 'हामी शुक्रबार (असोज २७) होम-स्टेका लागि भूर्जुङ्ग खोलातिर जाँदैछौं, तँ पनि आईपुग्।' भनेर। शुक्रबार बिहान ७:३० मा एउटा टुरिष्ट बसमा काठमाण्डौं छोडेको, बाटाका बेला-बेलाका जामले गर्दा पोखरा झर्दा साढे ३ भईसकेको थियो। दिनभरिको पसिना पखालेपछि भटभटेमा हुईँकिएँ म भुर्जुङ्गखोलातिर, साथीहरुले 'हामी बाटैमा तँलाई पर्खिरहेका हुन्छौं।' भन्नुभएको थियो। २०५४-५५ सालतिरै एकपटक कसैको पछाडि बसेर पुरुन्चौरमा एउटा बिहेमा पुगे बाहेक म यो बाटो हिँडेको थिईँन। हतारको आऊ-जाऊले गर्दा त्यो बेलाको दिगो स्मृति पनि छैन। लामाचौरको अलिक माथि रहेको अकला देबीको मन्दिरमा धेरै पटक पुगेपनि त्यहाँभन्दा माथि लाग्ने जाँगर कहिल्यै आएन। अकला कटेर अलिक माथि पुगेपछि फाँटको बीचबाट बाटो जाँदो रहेछ। बादलु दिन थियो, यसैले हिमालको भने दर्शन भएन, घमाईलो दिनमै पनि यो ठाऊँबाट शायद हिमाल देखिँदैन होला। सिमसिम पानी पनि परीरहेको थियो बाटाभरि। तर जे होस्, दुईतिर पहाड, बीचमा फाँट र फाँटको छातीबाट कुदेको पक्की बाटो-यात्रा रोमाञ्चक हुने रहेछ। मलाई यो भेकले पनि मोहनी लगायो। पुरुञ्चौरतिरैबाट अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र शुरु हुने रहेछ, बाटामा ठडिएका बोर्डहरुले त्यसै भन्थे। १० किलोमीटरभन्दा बढी हुईँकिसकेपछि साथीहरुलाई बाटैमा भेटियो। समूहमा दुईजना (मेरा लागि) नयाँ साथीहरु पनि हुनुहुँदो रहेछ, दुबै पृथ्वीनारायण क्याम्पसका प्राध्यापक। एकजना स्थानीय दाईपनि संगै लाग्नुभयो हामीसंग। मैले कुरो पछि बुझें। हाम्रा साथीहरुले एउटा पसलमा नजिकको राम्रो होम-स्टे गन्तब्यका बारेमा सोधखोज गर्दाको कुराकानी सुनेर ती दाइले 'ल म लैजान्छु तपाईँहरुलाई!' भन्नुभएको रहेछ। हामी उहाँकै गाऊँतिर जाँदै रहेछौं। हट्टाकट्टा र 'फिट' शरीरका हँसिला ती दाइको नाम रहेछ उदय बहादुर गुरुङ्ग।
तातोपानीबाट अन्दाजी ३-४ किमीको कच्ची बाटो कटेपछि दुईतिरबाट पहाडहरुले च्यापिएको अर्को एउटा फाँटमा पुगियो। त्यो ठाऊँको नाम सोध्न बिर्सिएछ। त्यहीँको एउटा घरको आँगनमा सबैका भटभटे बिसाएर उकालो लागियो। साथीहरुले हाम्रो गन्तब्य गाऊँ काउरे हो भन्थे, तर पछि थाहा भयो गाऊँको वास्तविक नाम काभ्रे रहेछ। 'हाम्रो गाऊँको नाम बिगारिदिए मान्छेहरुले!' भनेर स्थानीयहरु दुखेसो गर्दै थिए। कृषिप्रधान यो सानो गाऊँमा जम्मा २१ घरधुरी रहेछन्, ४ घर विश्वकर्माहरुका रहेछन्, बाँकी सबै गुरुङ्गहरुका रहेछन्। साँझको पाहुना बनेर हामी गाऊँको एउटा घरमा पस्यौं। अग्लो पिँढीमा बसेर भलाकुसारी र 'खानपीन' शुरु भयो। एकछिनपछि एकजना हँसिली बहिनी देवी गुरुङ्ग आईपुग्नुभयो। पोखराकै कुनै उच्च माविबाट १२ कक्षासम्मको अध्ययन गर्नुभएकी देवी बहिनी काभ्रे गाऊँको होम-स्टे सम्बन्धी गतिबिधिहरुको संयोजक हुनुहुँदो रहेछ। उहाँसंग काभ्रे गाऊँ र होम-स्टे कार्यक्रमका कुराहरु भए। एउटा 'औपचारिक' परिचयात्मक कार्यक्रम पनि भयो देवी बहिनीकै आग्रहमा। सन् २००८ बाट शुरु भएको रहेछ काभ्रेमा होम-स्टे। पाहुनाहरुलाई राख्न पालो प्रथा लगाईएको रहेछ, एक पटकका पाहुनालाई एउटा घरमा राखेपछि अर्को पटककालाई अर्को घरमा राखिँदो रहेछ र यहि क्रममा गाऊँका सबै घरहरु सहभागी हुँदा रहेछन्। एउटा पहाडको फेदमा बसेको काभ्रे गाऊँबाट सामुन्नेको पहाडको फेदमा झुरुप्प बसेको अर्को गाऊँका बत्तीहरु देखिन्थे। त्यो अर्को गुरुङ्ग गाऊँ मिर्सा रहेछ। मिर्साको नजिकका पहाडहरुका माथि-माथि पनि फाट्टफुट्ट बिजुलीको उज्यालो देखिन्थ्यो। यो भेगका पहाडहरुमा सबैतिर केन्द्रीय प्रसारणको विद्युत जोडिएको रहेछ। एकछिनको नाचगान पछि हामीलाई उदय दाईको घरमा खाना खुवाईयो। मेरो भागको शाकाहारी खाना त स्वादिष्ट थियो नै, अरु (सबै) मासु खाने साथीहरुले पनि जिब्रो पड्काई-पड्काई खाएकाले उनीहरुलाई पनि सन्तुष्टि भएको पक्का हो। खानापछि पनि नाचगान जारी रह्यो। नाचगान खासै राम्ररी संयोजित (coordinated) भने थिएन। स्थानीयहरुभन्दा हामीनै बढी नाच्यौं होला:) दगामकै समस्या यहाँ पनि रहेछ, युवाहरु कि शहरतिर कि विदेशतिर रहेछन्। उसैपनि २१ घरधुरीको सानो गाऊँ, त्यसमाथि पलायन; १७-१८ देखि ४०-४५ उमेरका मान्छे देख्नै गाह्रो। स्थानीय मौलिक साँस्कृतिक सम्पदा (लोकगीत, लोकनाच आदि) त थोरै देखियो नै, बरु एकछिनपछि स्पीकर ल्याएर स्थानीय भाइहरुले 'मुन्नी बदनाम हुई---' र 'डिङ्का चिका---' पनि पो बजाउन थाले! कठै नेपाली गाऊँहरुको नियति! मलाई लाग्छ काभ्रे गाऊँ साँस्कृतिक रुपले पक्का पनि सम्पन्न छ, तर युवा शक्तिको पलायनले गर्दा अब त्यो साँस्कृतिक सम्पन्नतालाई कायम राख्न मुश्किल हुँदै गईरहेको छ। यो कथा नेपालका सबै गाऊँहरुमा दोहोरिईरहेको छ निरन्तर।
तर समग्रमा काभ्रेमा कटेको एक रात निकै रमाईलो रह्यो। गाऊँलेहरुको न्यानो आत्मीयता अझै चोखै छ त्यहाँ र प्रकृति अझै सुन्दर छ त्यहाँ। यति भएपछि अरु कुरालाई दिमागको तपसीलमा पठाउन कुनै गाह्रो हुँदैन।
हिन्दी फिल्मी गीतका बारेमा भने भोलिपल्ट आगन्तुक पुस्तिकामा एउटा सुझाव लेखियो। हामी ७ जना मध्ये ४जनालाई उदय दाइको घरमा सुताईयो, बाँकी तीनलाई संगैको (नाचगान गरिएको) घरमा। उदय दाइले आफ्नो घरमा दशजनासम्म पाहुनालाई सुताउन मिल्नेगरी कोठाहरु थप्दै गर्नुभएको रहेछ।
बिहान उठेपछि माछापूच्छ्रेको दर्शन गरियो। मिर्सा गाऊँ पनि देखियो। त्यहाँ पनि कुनै दिन पुग्ने योजना बन्यो हाम्रो। मिर्साभन्दा अलिक उचाईमा छ काभ्रे, तर काभ्रेबाट हेर्दा मिर्सा जस्तो देखिन्छ, मिर्साबाट काभ्रे त्यस्तै देखिँदो हो। २१ घरधुरीको काभ्रेभन्दा मिर्सा निकै ठूलो भने देखिन्छ।
बिहान एकछिन गाऊँ घुमियो। र खाना खाएर काभ्रेसंग बिदाबादी भईयो।
स्मरणीय पलहरुका लागि सुन्दर काभ्रेलाई हार्दिक धन्यबाद!
ऊ--- त्यो (दाहिनेतिरको) भिरमाथि बसेको छ काभ्रे गाऊँ। भोलिपल्ट फर्कने बेला खिचेको फोटो हो यो।
नाचगानको एक क्षण।
भेला भएका मनकारी काभ्रेलीहरु। उभिईरहेकी यी नानीले खुब राम्रो नाच्दीरहिछन्।
नमस्ते माछापूच्छ्रे। पोखराबाट जस्तो देखिन्छ, यहाँबाट पनि ठ्याक्कै त्यस्तै देखिँदो रहेछ, र अलिकति छेकिँदो पनि रहेछ।
काभ्रेबाट हेर्दा मिर्सा गाऊँ। यहाँपनि एकदिन पुगिएला।
काभ्रेसंग बिदा भएर फर्कँदै मेरा सहयात्रीहरु।
Kalankisthan Rd, Kathmandu, Nepal
यहाँहरु सबैमा दशैं-२०६८ को हार्दिक मंगलमय शुभकामना!
तपाईँको जीवनमा स्वास्थ्य, आनन्द, सफलता र समृद्धिको निरन्तर वर्षा भईरहोस्!